वर्णन मिडिया छोराछारीलाई नीजि विद्यालयमा पढाउनुका फाइदावारे बताउँदै विष्णु पराजुली – अध्यक्ष एनप्याव्सन काठमाडौ - वर्णन मिडिया
काठमाडौँ । नेपालमा नीजि विद्यालयहरुले अभिभावकहरुसंग बढी शुल्क लिए भन्ने सन्दर्भमा समय समयमा कुरा उठ्छ तैपनि अभिभावकले शुल्क तिरेकै छन् । नीजि विद्यालयसंग अभिभावक र विद्यार्थी खुशि नै भएकोले त्यहाँ लगानी गरेका हुन्छन् । तैपनि नेपालमा नीजि शिक्षा महंगो छ भन्ने बहसपनि निरन्तर चली रहेको छ यो अवस्थामा सरकारले बनाएको उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगले नीजिलाई १० बर्ष भित्र सार्वजनिक गुठीमा लैजाने भन्ने सुझाव राखिएको भन्ने बाहिरी हल्ला छ । यसै परिवेशमा आधारीत भएर काठमाण्डौ जिल्ला एन प्याब्सनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद पराजुलीसंग वर्णन मिडियाले गरेका कुराकानीका केही अंश ।
वर्णन मिडियाः नयाँ भर्नाको समयमा नीजि विद्यालयमा शुल्क बढी भएको सधै चर्चा हुन्छ , यस्तो किन हुन्छ ?
विष्णु पराजुली: नीजि विद्यालयमा सरकारले दिएको पाठ्यक्रमको साथसाथै विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने अन्य थप बिषय पढाइएको हुन्छ । उनीहरुलाई थप संस्कारयुक्त र प्रतिस्पर्धि बनाउन प्रयास गरिन्छ । आवश्यक पर्ने सम्पुर्ण सुविधाहरुको व्यवस्था गरिएको हुन्छ यसैवापत नीजि विद्यालयले केही बढी शुल्क लिएको सत्य हो । तर त्यो शुल्क विद्यार्थीहरुकै हीतमा खर्च गरिएको छ भन्नेमा अभिभावक ढुक्क छन् । यसबाहेक कुनै बोर्डिङले कति शुल्क लिन पाउने भनी सरकारले तोकिदिए भन्दा बढि कसैले शुल्क लिन सक्दैन हुँदैन । तर देशमा एउटा समुह छ जसले ठिक भर्नाको मुखमा आएर तालाबन्दी गर्दछ , अनि बोर्डिङले महंगो शूल्क लिए भन्ने हल्ला गरिदिन्छ अनि शूरुहुन्छ अनावश्यक तनाव , चन्दा आतंक थप के के । आजसम्म कुनै अभिभावकले शुल्क महंगो भयो भनेको छैन । बीचका भर्जुअल अभिभावक बनेर अनेक तनाव सृजना गर्दछन् । वास्तविक अभिभावकले नीजि विद्यालयलाई खराव भनेको भए त नेपालमा नीजि शिक्षाको शुरुवात नै हुने थिएन । कसैले नीजिमा पढाउन वाध्य पारेको छैन ।
वर्णन मिडियाः के नेपालमा सवै शिक्षा राज्यले जिम्मा लिन सक्दैन ?
विष्णु पराजुलीः वर्तमान संरचना भित्र रहेर नेपाल सरकारले सम्पुर्ण शिक्षा आफ्नो हातमा लिन संभव देखिदैन । काठमाण्डौ कै कुरा गर्ने हो भने यहाँ १२०० जति नीजि विद्यालय छन् र ३०० सामुदायिक विद्यालय छन् । ३०० सामुदायिकको पुर्वाधारपनि राम्रो छैन । अव १२०० नीजि विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई ३०० सामुदायिकमा एडजस्ट गर्न सक्ने अवस्था नै रहदैन ।
राज्यले लगानी थपेर अरु हजार सामुदायिक विद्यालय बनाउने हाे भने मात्र काठमाण्डाैमा सम्भव हाेला । यसबाट पनि बिकास बजेट शिक्षा क्षेत्रमै लगानी हुन्छ अनि अन्यत्र सडक , पूल बिजुली , औषधी आदिको संभावना नै समप्त हुन्छ । त्यसैले सरकारले शिक्षामा पनि ३ खम्बे अर्थनीतिलार्ई नै अवलम्वन गरेर जानुको विकल्प म देख्दिन । कुनैले अचाक्ली धेरै शुल्क लिएमा त्यसको अनुगमन गरेर सवैलाई साथमा लिएर एउटा आदर्श शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नुमै बुद्धिमत्ता हुन्छ । नीजिलाई बाइपास गर्ने अवस्था अहिले छैन ।
वर्णन मिडियाः सरकारले अवको १० बर्षमा नीजि विद्यालयलाई सार्वजनिक गुठिमा लैजाने भन्दै छ त ?
विष्णु पराजुलीः होइन सरकारले अहिले त्यो कुराहरू कतै सार्वजनिक गरेको छैन । यहिबर्ष आषाढ तिर बनेको उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले यो कुरा शिफारिस गरेको छ भन्ने सुनिएको छ । जहाँसम्म लाग्दछ ऐनमा यो कुरा समावेश हुने छैन किनकी आजको १० बर्षसम्ममा सरकारले सामुदयिक विद्यालयलाई नीजि जत्तिकै प्रतिस्पर्धि बनाउन सकेमा अभिभावकले नै सवै विद्यार्थी सामुदायिक मै लैजान्छन् नीजिलाई गुठीमा जाने वाध्यता नै रहेन सवै नीजि विद्यालय बन्द नै हुनेभए । होइन, सामुदायिकमा यही प्रकारको राजाको काम कहिले जाला घामको अवस्था रहेमा विद्यार्थी नीजिमै आउनेछन् । संविधानले छनौटको सुविधा दिएकै छ त्यसैको आधारमा नीजि विद्यालय आफ्नै तरिकाले चल्ने अवस्था आउने नै छ ।
सरकारले बनाएको नियम बमोजिम नै हामीहरु स्थापना भएका हौ । हामी कम्पनी ऐनमा दर्ता भएका छौ । सरकार कै आदेशमा स्कुल कम्पनीमा जाने अनि फेरी सरकारले यसलाई गुठिमा लैजा भन्न मिल्दैन । यदि त्यसाे गरिएमा देशका सम्पुर्ण नीजि संरचनामा सरकार प्रति अविश्वासको वातावरण उत्पन्न हुन्छ । आज देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको नीजि क्षेत्रलाई बिगार्न चाहादैन होला सरकार । अव दर्ता रोकिन सक्ला तर भएकालाई कुनै अवरोध नगर्ला सरकारले ।
वर्णन: भारतमा सवै नीजि विद्यालय गुठी अन्तर्गत सञ्चालित छन् होइन र ?
विष्णु पराजुलीः भारतमा जमिन सरकारले दिन्छ , शूरु देखि नै यस्तै नियम थियो । त्यो वाहेक भारतका सामुदायिक विद्यालय पनि नीजि कै टक्करमा प्रतिस्पर्धि छन् । नेपालमा त्यस्तो छैन । यहाँ २।४ वटा बाहेक सामुदायिक विद्यालयमा राजनीतिको बोलवाला छ । कामप्रति डेडिकेशन छैन । त्यसैले भारत र अमेरिकाको उदाहरण यहाँ मिल्दैन । सामुदायिकमा राम्रो सुधार भए हामी स्वतः लिक्वीडेशनमा जान्छौ अन्यथा बलजफ्ती स्वरुप परिवर्तन गराउनु राम्रो हुँदैन । जमिन सरकारले दिएमा वा भवन बनाइदिएमा त गुठीमा जान समस्या रहेन । तर सबै लगानी गर नाफा नखाउँ भन्न भएन ।
वर्णनः नीजिमा सर्वसाधारणको पहुँच भएन नी त ? किन ?
विष्णु पराजुलीः त्यस्ताे होइन नेपालमा नीजि विद्यालयलाई ४ तहमा बर्गिकरण गरिएको छ । सस्तो देखि महंगासम्म विद्यालयहरु छन् । त्यसैले सामुदायिक पढाउन सक्नेले नीजिमा पनि पढाउन सक्छ । यो मात्र नीजिलाई तर्साएर चन्दा उठाउने समुहका गैह्रवस्तुनिष्ठ प्रोपगण्डा मात्र हुन् । सेवा र सुविधा अनुसार शुल्क लिने हो । केही कम सुविधा भएको ठाउँमा सस्तोमा पनि पढाइ हुन्छ । तर जहाँ पढेपनि शिक्षा महंगो नै हुन्छ । शुल्क बाहेक सामुदायिकमा पनि किताव , कापि, कलम , ट्यूशन फि सबै चाहिन्छ नै । त्यसमा अलिकति लगानी गरेमा नीजिमै पढाउन सजिलाे सकिन्छ ।
वर्णन: यहाँहरुको समाजिक उत्तरदायित्व ?
विष्णु पराजुली : पहिलो कुरा त नेपालमा सवैभन्दा बढी कर नीजि विद्यालयले तिर्दछ । नेपालका नीजि विद्यालयहरुमा हजारौ विद्यार्थीले छात्रवृत्तिमा पढ्दछन् । मेडिकल कलेज देखि सवै प्राविधिक विद्यालयहरुको छात्रवृत्ति जोड्दा ठूलो गरीवबर्ग नीःशुल्क पढी रहेको अवस्था छ । त्यसैले नीजि विद्यालयले अभिभावक प्रति , कर्मचारी प्रति , शिक्षक र सरकारप्रति सामाजीक उत्तरदायित्व निर्वाहन गरी रहेको छ । विडम्बना नीजिमा छात्रवृत्ति पाएर पढेकालाई समेत सरकारले कक्षा १२ पछि बिइ, एमबिबिएसमा छात्रवृत्ति दिदैन । सामुदायिकमा राजनीति गरेर नपढाउने त्यसको मार नीजिका विद्यार्थीले भोग्नु परेको छ । जहाँ पढेकोलाई पनि छात्रवृति दिनुपर्दछ भन्ने एनप्याव्सनको जोडदार माग हो । कसैले कहाँ पढ्यो , कतिको नास्ता खायो र कस्तो साइकिल चढ्यो भनेर छात्रवृति रोकिने देश नेपालमात्र हो जस्तो लाग्दछ ।
वर्णनः शुल्क बढी लिने तर शिक्षकलाई थोरैमा कज्याउने भन्ने गुनासोको वारेमा के भन्नु हुन्छ ?
विष्णु पराजुलीः हामीले नेपाल राष्ट्रबैंकको मुद्रा स्फिीति दर र सरकारले बढउने तलबको आधारलाई मानक मानेर समय सापेक्ष शुल्क बढाउनु पर्दछ । यो कुरालाई अभिभावकहरुले स्विकार्नु भएको हुन्छ । तर हाम्रो दुःख नदेख्ने , लगानीपनि नदेख्ने तर कमाईमात्र देख्ने पक्षपाति आँखाहरुको वारेमा के भन्न सकिन्छ र ? तर नीजि पढेको कुन बच्चाले शुल्क महंगो भयो भनेको छ । देखाउनुहोस , हामी आत्मआलोचना गर्न वाध्य हुने छौ । केवल धरातल नबुझि गरिने आलोचनालाई के भन्न सकिन्छ र ? सेवाको वदला शुल्क हो । जसले सेवाग्राहीलाई विश्व प्रतिस्पर्धि नागरिक बनाउँदछ , त्यो निःशुल्क हुन सक्दैन । जहाँसम्म शिक्षकलाई थोरै तलब दिएकोमा हाम्रो पनि गुनासो छ , राम्रो शिक्षक थोरैमा बस्दैन । केहीलाई कम दिइएको सुनिन्छ त्यो राम्रो होइन । तर सरकारले पनि स्थायी बाहेक नीजिश्रोतका शिक्षकलाई थोरै तलब दिएको छ । त्यसतर्फ पनि आवाज उठोस । हामी सकेसम्म जीवन निर्वाहको आधारमा तलब दिन प्रतिबद्ध छौ ।
वर्णनः अन्तिममा नेपालमा नीजि विद्यालयको क्रेज बढ्नुका कारण के के हुन् ?
विष्णु पराजुलीः पहिलो कुरा नीजि विद्यालयले विद्यार्थिलाई अलग अलग उपचार गर्दछन् । कमजोरलाई सरदर र सरदरलाई एक्सीलेन्ट बनाउन प्रयास गर्दछन् । पाठ्यक्रममा भएको वाहेक अतिरिक्त ज्ञान दिन्छ , खेल्न, रमाउन, सोच्न र गर्न अवसर दिइन्छ । प्रत्येक बच्चासंग आत्मीय व्यवहार गरिन्छ । प्रतिस्पर्धि बन्ने आधारशीला सानैदेखि बनाइन्छ । हाम्रो टिम नै कसरी बच्चालाई सफल बनाएर आफ्नो प्रज्ञीक व्यवशायलाई प्रगतिमा ल्याउने भन्नेवारेमा निरन्तर चीन्तनशील हुन्छ । त्यसैले अभिभावकहरु हामीसंग खुशि हुनुहुन्छ र देशको गरिमा नै बढेको छ नीजि विद्यालयको कारणले । यसलाई नियमन गरौं तर वन्दको धम्की नदिऊँ विद्यार्थीको भविश्य अन्यौलमा जानेछ । नेपालीले विदेशमा लगेर पढाउन थाल्नेछन् ।